Nhau - Vacuum Sealing - Izvo Zvaunofanirwa Kuziva Usati Watenga
Iyo yekuvhara seal ndeimwe yeayo emuchina michina iwe yausingazive kuti yakawanda sei yaunoshandisa - kusvikira iwe uchitenga imwe. Isu tinoshandisa yedu yekuchenesa seal yekuchengetedza chikafu, yekuisa chisimbiso mumidziyo uye mabhodhoro, kuchengetedza ngura, kugadzirisa mabhegi uye kugadzirira kwechimbichimbi. Iwe unogona zvakare kushandisa yako yekuvharidzira sealer kune yega vide yekubika. Mune ino posvo, isu tichakurukura nzira dzekushandisa seal yako, ita enzaniso yeFoodsaver mamodheru uye maficha avo, uye tigovane mamwe matipi pamabhegi eFoodsaver.
KUSVIRA SEI VACUUM SEALER MACHINE KUSHANDA?
Mishini yekuvhara mweya inosveta mweya kubva muhomwe yepurasitiki kana chigubhu woisa mucherechedzo kuitira kuti pasawane mweya unokwanisa kudzokerazve. Kana uchivhara zvinhu zvakapfava kana zvine muto mumabhegi epurasitiki ekuchengetedza mafiriji, zvakanakisa kuomesa zvinhu kwemaawa mashoma usati wavhara ivo. Izvi zvinodzivirira chikafu kubva pakupwanywa kana kurasikirwa nejusi panguva yekuzorora. Kuvhara chisimbiso kunoita basa rakakura kuchengetedza zvirimo kubva kune oxygen, zvinwiwa uye zviputi.
Hechino kuratidzira nekukurumidza kwemaitiro ekushandisa yekuvhara seal.
NEI UCHITORA VACUUM SEALER?
Ini ndaisa pamwechete rondedzero yenzira dzakasiyana dzekushandisa yekuvhara imba yekuisa sevhisi kuratidza kuti yekuvhara sevha ingabatsira sei mukicheni yako nemumba.
YANGU TOP Sarudzo DZAKANAKA VACUUM SEALER NDE:
FoodSaver FM2000-FFP Yekubharidzira Sealing System ine Starter Bhegi / Rongedza Rakagadzika - rekuvhara bhegi chete, pabhajeti. Inokodzera munzvimbo diki yekuchengetera, mabhegi akachengetwa zvakasiyana.
FoodSaver FM2435-ECR Inovhara Sealing System neBonus Handheld Sealer uye Starter Kit - Mid-level muchina, inosanganisira bhegi yekuchengetedza uye inobatwa.
# 1 - CHOKWADI CHOKUDYA
Ini ndinoshandisa yangu yekuvharidzira seal yekuchengetedza chikafu kupfuura chero kumwe kushandiswa. Kuvhara chisimbiso kunowedzera zvakanyanya pasherufu hupenyu hwechikafu mufiriji, firiji uye pantry.
Wakambokanda bhegi rezvirimwa mufiriji kana mufiriji, uchifunga kuti ucharishandisa nekukasira saka haufanire kuita chero chinhu chakakosha nekupakira, wozoiwana gare gare, giya rakatsva kana kuumbwa?
Zvinotora masekondi chete kuti ubvise chisimbiso chikafu, uye kuvhara kwekuvhara kunowedzera hupenyu hwesherufu hwechikafu kumakore panzvimbo pemwedzi. Vacuum nyama dzakasimbiswa hadzi oxidize uye dzotsvukira. Isu tinogara tichiwana yedu yakawanda yemombe yekutenga vacuum yakavharwa.
GADZIRA ZVINOGONESESA KWEMAKORE PASI PEMWEDZI
Ini ndinoshandisa yangu yekuvharidzira seal yezvitsva zvinogadzirwa nechando senge pizi, broccoli, sitirobheri, mhiripiri, blubheri, kare, chard, bhinzi dzegirini uye zvakaringana chero chinhu chisiri puree.
Ini ndinoda kuomesa zvigadzirwa pachigadzirwa mapepa, uyezve kurongedza mumafuraji / muhombe saizi mabhegi uye chisimbiso. Nenzira iyoyo, pandinovhura mabhegi, mapea kana maabriji haana kukomberedzwa mubhokisi rimwe hombe rakagwamba nechando, uye ndinogona kudurura zvishoma kana zvakanyanya sezvandinoda panguva imwechete. Pre-kutonhodza zvakapfava kana zvakakwirira zvemvura zvinhu zvinozvichengeta zvichipwanywa uye zvine jusi nekukweva kwevhavha.